MBA AHAZOANAO ANDRO TSARA DIA MILA FAHARETANA IANAO HAMAKY ITY VAVAKA FA TSY HANENENANAO ARY HO HITANAO FA HIOVA NY FIAINANAO.
MAZOTOA ARY .
Manasa anao hamaky izao vavaka izao amin’ny finoana marina, fa hanampy anao izany.Minoa ary aza mametra-panontaniana dia ho tahiana ianao.
Ny olana goavana amintsika dia ny tsy hinoantsika fa Andriamanitra dia afaka manokatra varavarana goavana ary handrotsaka fahasoavana be dia be ho antsika. Mangataka anao aho hino an’Andriamanitra.
Fa mahatoky amin’ny teniny Izy.
Ireto zavatra telo ireto no hiseho amin’ny fiainanao amin’ity herinandro ity :
1-Hahita sitraka amin’ny olona izay tsy ampoizinao ianao
2-Hanao izay rehetra araka ny tokony ho izy ianao ,ary tsy ho takona izany.
3-Hahita an’Andriamanitra ianao, ary tsy ho toy ny taloha intsony ianao mandrakizay
Ny vavaka ataoko ho anao androany:
-NY maso rehetra mamaky izao hafatra izao ,dia tsy hahita ny faharatsiana intsony.
-Ny tanana rehetra mandefa ity hafatra ity,tsy ho sasa-poana .
-Ny vava rehetra manambara “AMEN”aorian’ity vavaka ity, dia hifaly mandrakariva.
Mitoera mandrakariva ao amin’ny fitiavan’Andriamanitra mandritry ny hanaparitahanao izao vavaka izao, ary minoa Azy amin’ny fonao rehetra, dia ho eo anilanao mandrakariva Andriamanitra, satria mahatoky Izy .AMEN.
Raha mikatsaka ny tena fitahiana , tohizo ny famakianao izao vavaka izao:
-Amin’ny anaran’ny Ray, Ilay Andriamanitra , be indrafo, sy be fihantrana Mangataka Aminao aho, ny hitahianao mandrakariva ahy sy ny ankohonako. Fantatrao ny halehibeazan’ny fianakaviana mihoatra ny ray, ny reny, ny rahavavy ,ny rahalahy, ny vady, fa ireo rehetra izay mino sy manantena Anao.
Ray masina indrindra ô! mangataka izao vavaka izao aho ho fitahiana , tsy ho an’izay nandefa izao hafatra izao ho ahy ihany, fa ho an’izay handefasako ihany koa izao hafatra izao.
Fantatro ny herin’ny rojom-bavaka izay ”mahery noho ny zavatra rehetra “ho an’izay mino sy manantena Anao.
Misaotra Anao sahady aho Ray ô! Noho ny fitahianao. RAY ô! hafao amin’ny trosa sy izay vesatr’izany ireo olona izay mamaky izao vavaka izao. Omeo ahy ny fahendrena avy aminao, ahafahako mitantana izay rehetra nomenao ahy, tsapako tokoa ny fahatsaranao sy ny herinao Ray ô! Indrindra raha manaja Anao sy mandeha araka ny sitraponao izahay, dia hanana finoana na dia kely tahaka ny voatsinampy aza, dia hampamokaranao sy handrotsahanao fitahiana sesehena.
Misaotra anao aho Ray, tamin’ny fitahiana vao natolotrao, sy ny fahasovana izay mbola homenao ahy izay fantatro fa tsy hisy fahataperana mandrakizay. Amin’ny anaran’ny Jesoa.
Mandraisa iray minitra, ary alefaso ho an’izay mifanerasera aminao izao vavaka izao, fa afaka ora vitsy dia nitarika olona maro hivavaka amin’Andriamanitra ianao sy hivavaka ho an’ny hafa ianao. Makà fotoana hipetrahana ary banjino sy ankafizo ny firotsahan’ny fitahiana avy amin’Andriamanitra ho anao.
Ilay tsara sy tsara anarana indrindra.
Raha tia an’Andriamanitra ianao , tsy menatra Azy, ampitao izao hafatra izao ho an’ny olona 20, ho hitanao ny fiantraikan’izany ao antin’ny 5 minitra, ary hisy vavaka an’arivony hipololotra……. Hitahy anao anie ny Tompo.